Yaa Somaliland ku eedeysay raasaastii habeen hore lagu riday saldhiga booliska Boorame? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Somaliland ayaa Suldaan Abubakar Cilmi Wabar oo dhawaan ka goostay Somaliland, islamarkaana maleeshiyaad ku uruursaday xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ku eedeeyey inuu ka dambeeyey rasaas 23-kii bishaan Janaayo lagu furay saldhiga booliska magaalada Boorame ee xarrunta gobolka Awdal.
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland, Maxamed Jaamac Abgaal, ayaa sheegay in Suldaanka Abubakar Cilmi Wabar ka dambeeyay weerarkii habeen hore lagu qaaday Saldhiga Ciidanka Booliska Boorama.
Saldhiga Booliska ayaa habeen hore lagu furay rasaas, iyadoo aan la aqoonsan cidda riday xabbadahaas, islamarkaana aan cid loo qaban.
Wasiirka oo xafiiska wasaaraddiisa Hargeysa ku qabtay Shir jaraa’id ayaa sheegay inay talaabo ka qaadayaan Suldaanka iyo cida taabacsan ba “Waxaan ka tacsiyadaynayaa Xabbadii habeen hore labadii iyagoo soo shaqaystay oo soo daalay Suldaan Wabar la dulyimid, aad iyo aad anigoo uga xun ayaan runtii ka tacsiyadaynayaa.” Ayuu yiri Wasiir Abgaal.
Wasiirka ayaa sheegay inaanu Suldaan Wabar iyo Qayrkii toona ka aqbalayn in uu xumaado Amaanka Boorama. Waxa uu sheegay inuu Xilkaasi qaadayo islamarkaana aanay dib u dhici doonin khalkhal amni oo ku dhaca bulshada Awdal. Isagoo la hadlay Suldaan wabar waxa uu sheegay in si toos ah la isku waajihi doono wakhtigan.
“Ma aqbali doono in Suldaan Wabar rasaas la dulyimaado dadka rayidka iyo caruurta. Suldaan Wabar wuu na Khaayimay, dadkii soo doortay ayuu khaayimay, Somaliland buu khaayimay, waxaanay xaaladdiisu maraysaa inuu dadkii maaskiinta ahaa soo weeraro, waanu ka celinaynaa,mana aqbalayno” ayuu sidoo kale yiri Wasiir Abgaal.
Wasiir Abgaal waxa uu farriin adag u diray Qurbejoog uu sheegay inay tiro yar tahay oo taageersan Suldaan Wabar kuwaasi oo uu kula taliyay inaanay fidin Warar ku tiri ku teen ah islamarkaana Reer Awdal leeyihiin Somaliland.
Ma jiro wax xaqiijinaya in suldaan Wabar ka dambeeyey werarkii habeen rag hubeysan ku qaadeen saldhiga booliska magaalada Boorame, halkaasoo ah meesha uu suldaankaasi kasoo jeedo.
Suldaan Wabar ayaa horay u cadeystay inuu kasoo hojeedo maamulka Somaliland, isagoo ku eedeeyey inuu gacan bidixeeyey dadka degan gobolka Awdal.